Ndị na-ebubata ngwa ngwa na ụlọ ọrụ - ndị na-emepụta ngwa ngwa China
Mmiri oyi oyi na-ekewa n'ime ụdị jụrụ oyi na mmiri na-ajụkarị oyi.
Mmiri jụrụ oyi na-eji mmiri sitere na ụlọ elu dị jụụ na mpụga wepụ okpomọkụ site na condenser. A na-ejikarị na nnukwu ngwa mmepụta ihe, gụnyere mmepụta na nhazi nri.
Igwe ikuku jụrụ oyi na-eji ikuku ambient wepụ okpomọkụ, a na-ewepụkwa okpomọkụ site na sekit refrigeration site na condenser. Enwere ike iji ya na ngwa ụlọ ọrụ dị iche iche, gụnyere ọgwụ, ebe a na-eme biya, ụlọ nyocha, ịkpụzi injection, wdg;
Hydrogen na Oxygen Generator, Holtec Nitrogen Generator, Ọgbọ ike hydrogen, Psa Nitrogen osisi, Psa Nitrogen, Atlas Copco Ngp,